Brendan Rodgers Oo Shaaciyey Shuruudda Kaliya Ee Uu Ku Noqon Karayo Tababaraha Arsenal - Gool24.Net
Brendan Rodgers Oo Shaaciyey Shuruudda Kaliya Ee Uu Ku Noqon Karayo Tababaraha Arsenal
Tababaraha Leicester City, Brendan Rodgers ayaa qirtay in uu ku biiri karayo Arsenal oo uu noqon karayo tababaraha rasmiga ah ee beddelaya Unai Emery, xilkana ka tirsana Freddie Ljungberg oo si ku-meelgaadh ah loogu sii dhiibay, laakiin waxa jirta shuruud aan cuslayn oo ka horreysa in Gunners ay u oofiso.
Arsenal ayaa lala xidhiidhinayaa dhawr tababare oo ay ka mid yihiin Rodgers iyo Arteta, hase yeeshee macallinka Leicester si iskii ah uguma wareegi karayo Emirates maadaama uu jiro qodob heshiis oo xakamaynaya.
Qandaraaska uu Rodgers kula jiro Leicester City ayaa waxa ku jira qodob dhigaya lacagta lagu burburin karayo heshiiskiisa, taas oo ay tahay inay bixiso koox kasta oo doonaysa.
Rodgers oo la weydiiyey waxa uu ka yeelayo xiisaha uga imanaya Arsenal ayaa waxa uu si kooban u sheegay in heshiiska uu kula jiro Leicester City uu wax walba suurtogelinayo, xaaladduna ku xidhnaan doonto.
“Inta badan waxa suurtogalka ah waa qandaraasyada tababareyaasha, laakiin (hadalkaygu) waxa uu qiyaasayaa xaaladahan oo kale.” Ayuu yidhi.
Tababare Rodgers waxa uu aaminsan yahay in ay jirto shaqo qabyo ka ah oo ay tahay inuu ka qabto Leicester City oo uu xili ciyaareedkii hore la wawreegay, waxaanu yidhi: “Isbeddel ayaan sameeyey siddeed ama sagaal bilood ka hor. Halkan ayaan imid, waanan ku faraxsanaa tan iyo markii aan halkan imid, illaa haddana waan faraxsanahay, waxaan halkan u imidna waxay ahayd inaan la shaqeeyo ciyartoyga, walina shaqo badan oo aan qabto ayaa ii taalla. ”
Dhinaca kale, tababare Rodgers waxa uu ka hadlay isbeddelka ay samaysay Leicester City iyo sida ay ugu suurtogashay inay kaalinta labaad soo galaan, iyagoo ka dhibco badan Chelsea iyo Manchester City, taas oo ka dhigan inuu shaqo adag qabtay marka la barbar-dhigo halkii ay kooxdu ku sugnayd markii uu xilka qabtay xili ciyaareedkii hore.